Anti-Aging Hormone Growth in Bangkok - HGH Therapy in Thailand
Ny hormonenan'ny fitomboan'ny olombelona manoloana ny fahanteran'ny fahanterana. Ny vokatry ny fisedrana ara-pitsaboana any Thailand.
Ao amin'ny 1999, ny Ivom-pirenena ao amin'ny Thailand Ny fahanterana dia namoaka ny iray amin'ireo fianarana manan-danja maro mifandraika amin'ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny fisoloan-tena amin'ny fampiasana hormone fitomboan'olombelona (HGH). Ny tanjon'ity fianarana ity dia tanjona ary tsy niezaka fotsiny hanamarina ny fihanaky ny hormone HGH, fa mba hanaovana fandalinana mandanjalanja izay hampitombo ny fahalalana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fampiasana HGH amin'ny fanoherana ny fahanterana. Ireo mpandalina ny fianarana dia nizara ho antoko roa. Ny vondrona mpitsabo dia nahazo tsindrona ny HGH, fa ny vondrona mpitsabo dia nahazo tsindrona plasebo iray.
Ny jeren'ny natiora dia jamba roa, izany hoe, na ny dokotera na ny marary no tsy nahalala izay nahazo tsindrona ny HGH, fa nanisy plasebo. Ity fikarohana ity dia ihany koa hetsika nasionaly ahitana klinikana manerana an'i Thailand. Nandray anjara tamin'ireo fitsapana, ny marary ary ny sasany manana soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny hormonenin'olombelona. Ny vondron'andron'ny fianarana dia manan-danja lehibe ary afaka manome fiheverana avo lenta amin'ny fahafahana mamantatra na dia ny fari-piainana ambany aza.
Ny Injection HGH dia mifandraika amin'ny karazana fitsaboana hafa
Na dia io fanadihadiana io aza dia natokana ho an'ny fitsaboana amin'ny fampiasana ny hormone ho an'ny olombelona, ​​raha ilaina, ny marary koa dia nahazo testosterone, progesterone ary estrogen. Ny tanjon'ity fianarana ity dia tsy natao fotsiny mba hampisehoana ny tombontsoa azo avy amin'ny hormone mitombo amin'ny olombelona ary toy ny hormonina hafa, toy ny testosterone, progesterone ary estrogen. Izany dia natao hampiroboroboana ny mety ho herin'ny fitsaboana HGH.
Ny fampiasana ny HGH dia notaterin'ny marary
Dr. Thierry Hertoghe, dia namoaka fikarohana momba ny fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny hormone HGH ho an'ireo marary mijaly noho ny tsy fahampian'ny hormonenan'ny olona. Manana taona maro be ireo marary ireo. Ny marary faran'izay tanora dia 27 taona sy ny lahimatoa 82. Tany am-piandohan'ny fianarana, Dr. Hertoghe sy ireo mpiara-miasa aminy dia nanamafy tamim-pitandremana ny fahasalaman'ny marary rehetra.
Rehefa avy nandrakitra an-tsoratra ny fahasalaman'ny marary izy ireo, dia nanao ny hormone hormone hormone fanindroany nandritra ny roa volana. Ny Dr. Hertoghe dia hita tamin'ireo marary ary nangataka azy ireo hameno fanadihadiana iray izay novaliany mikasika ny vokatry ny fitsaboana amin'ny fampiasana fanontaniana misy fanontaniana manazava ny tombontsoa azon'izy ireo avy amin'ny tsindrona hormonina amin'ny fitomboan'ny olombelona. Ireto manaraka ireto dia lisitr'ireo fanontaniana rehetra ao amin'ny valin'ny fanontaniana sy ny isan-jaton'ireo marary izay namaly fa mampitombo ny fahasalaman'izy ireo.
Marika famantarana ny tsy fahampiana HGH sy ny fahanterana
Ny isa maromaro marefo amin'ny tarehy - 75,5%
Ny rivotra dia iray amin'ireo famantarana hita matetika amin'ny fahanterana. Ny hoditra dia manomboka ny elasticity sy ny fahamendrehana ary mametraka azy toy ny tara-pahazavana sy ny fikoropahana lalina. Ny ankamaroan'ny marary izay nandray soa avy amin'ny inoan'ny hormone fitomboan'ny olombelona, ​​dia nanondro fa ny HGH dia nanalefaka tsipika maromaro na nitarika ho amin'ny fanjavonan'ny ketrona. Ny hipoka amin'ny hormone fitomboan'ny olombelona dia afaka manala ny sela hoditra ary manatsara ny tanjaky ny hozatry ny endriky ny tarehy, izay samy mandray andraikitra amin'ny fanjavonan'ny ketrona.
Po kokoa amin'ny tendany sy ny tarehiny - 67%
Rehefa mihantitra ny lehilahy sy ny vehivavy dia mihasimba eo ambanin'ny hoditra ny hozatra, ka mahatonga azy ireo ho afaka amin'ny fihenam-bolo. Ny roa ampahatelon'ny marary Dr. Hertoghe dia nitatitra fa vokatry ny fanoloana fitsaboana amin'ny hormone amin'ny fitomboan'ny olombelona dia mampihena ny hoditra mihantona eo amin'ny tendany sy ny tarehiny. Ny injections of HGH dia afaka nampitombo ny tonon'ny vatany, izay lasa tombony.
Ny hozatra mafy kokoa dia 60.7%
Mihoatra ny enina amin'ny marary folo no tafiditra tao amin'ny fianarana ny Dr Hertoghe, tao anatin'ny roa volana n'ny HGH, dia niova ny taolam-paty. Ny hormone fitomboan'ny olombelona dia afaka nitombo, toy ny vozon'ny totozy, ary ny haben'ny hozatra amin'ny fanovàna ny endriky ny hatsarana sy ny tanjany. Raha manana fahasalamana ara-pahasalamana hormonina ny fahasalaman'ny olona, ​​dia mahazo hery sy solika mahery kokoa ny hozakazo amin'ny endriky ny fihanaky ny tsimokaretina insuline 1, izay manatsara ny fahasalaman'ny taovam-pandehanana, indrindra amin'ny fampifanarahana amin'ny fampiasana ilaina sy ny sakafo.
Ny haavon'ny tavy ambany - 48%
Efa ho ny antsasaky ny marary nandray anjara tamin'ity fianarana ity vokatry ny HGH injection dia nanova ny endriky ny vatana. Ny hormonenan'ny fitomboan'ny olombelona dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny metabolisma, izay tena manjary mahakasika ny fomba entin'ny mozika sy ny fametrahana fatin'ny biby ao amin'ny vatana, fa indrindra indrindra manakaiky ny tapany afovoany. Ny aty dia mamadika HGH ao amin'ny IGF-1, ary manana fahafahana handrodana tavy matavy tsy mamokatra ary hamadika izany ho hery fanampiny!
Loko matevina kokoa sy matanjaka kokoa amin'ny 34.5%
Maherin'ny ampahatelon'ny mpanadihady no nanamarika fiovana lehibe teo amin'ny hoditra. Ireo marary ireo dia niaina fiovan'ny rafitry ny hoditra. Ny vokatra dia ny fihenjanana amin'ny hozatra sy ny fivoahana ny fivoahan'ny voana, fa tsy ny kôdeksa sy ny fihodinan'ny hoditra ihany no manjavona hiala, fa ireo fiovana ara-batana ihany koa dia manampy amin'ny fampitomboana ny halatra sy ny habetsahan'ny hoditra. Ny sela hoditra toy ny sela rehetra ao amin'ny vatana dia mila fikarakarana tsara indrindra. Tsy misy ny sela hoditra. Ny fahasamihafana dia ny hoditra dia taratra izay mibahana tsy tapaka ny fanerena ivelany, toy ny masoandro, ny mari-pana ary ny rivotra. Ny hormone fitomboan'ny olombelona dia afaka miaro ny hoditra amin'ny singa ary manakana ny fitsaboana, izay manampy ny hoditra hijanona maharitra sy mahery setra ary hanoherana ny fahasimbana.
Mihamaro ny volon'ny volo - 28,1%
Mihoatra ny ampahaefatry ny mpandray anjara tamin'ity fianarana ity no nahitana fiovana teo amin'ny volony, vokatry ny fiparitahan'ny hormonenan'ny olona. Na dia tsara kokoa aza izany vokatra tsara izany, ampahany manan-danja amin'ireo izay nandray fitsaboana HGH, dia mandinika ny volo salama vokatry ny fitsaboana. Rehefa manasitrana sy manaloka indray ny sela, dia manatsara ny fahasalaman'ny volon'ondry ihany koa. Ny hair follicles dia karazana sela hodinihina tsotra fotsiny ka ny fahasalaman'ny hoditra dia milalao mivantana amin'ny fahasalaman'ny volo.
Fampihetseham-po amin'ny kanseran'ny atidoha sy ny fihetseham-po ara-pihetseham-po amin'ny hormone, ny fitomboan'ny olombelona
Fampitomboana ny fifandanjana ara-pihetseham-po - 71,4%
Efa ho telo-polo ny marary no nahatsapa ny fanatsarana ny toe-piainan'ny Jeneraly Jeneraly. Ny tsy fahampian'ny hormonenan'ny fitomboan'ny taova dia nahatonga ny fihenan'ny fahasalamana ara-tsaina ary ny valin'ny fandinihana dia manome porofo fanampiny fa mety hampihena ny fahasalaman'ny saina ny tsy fahampian'ny hormone fitomboan'ny olona. Ho an'ny marary marobe, ny HGH dia afaka manome fiainana andavanandro sy mahafinaritra kokoa. Izany dia vokatry ny fiovan'ny fahatsapan-tena izay vokatry ny fiovana ara-batana izay mitranga ao amin'ny vatana, fa ny HGH ihany koa dia afaka manatsara ny simia ao amin'ny atidoha!
Mihamitombo ny haavon'ny angovo - 86.8%
Anisan'ireo marary nandray anjara tamin'ilay fianarana. Thierry, saika 9 avy amin'ny olona 10 rehetra dia niaina angovo mahery vaika. Ny ankamaroan'ny marary mijaly noho ny aretina, ny tsy fahampian'ny HGH dia manjary reraka. Ny HGH dia afaka mamporisika ny vatana, manampy anao hitoetra ho mailaka sy ho vonona kokoa haka andro iray. Ny hormone mitombo amin'ny olombelona dia mahavita izany noho ny antony maro. Ny iray amin'ireo antony dia ny fampitomboana ny fahaizan'ny vatana hahatsapa ny fitsangatsanganana farany vokatry ny torimaso. Ny antony iray hafa dia ny fampiasana ny tavy biby, vokatry ny IGF-1, dia manome ny haavon'ny haavon'ny angovo ho an'ny haikika.
Mihamatanjaka ny fahasalamana - 86,04%
Ankoatra ny fampiakarana ny haavon'ny angovo ankapobeny, ny hormone mitombo amin'ny olombelona dia afaka mampitombo ny fahaizana ara-batana hiasa ho an'ireo izay mijaly noho ny tsy fahampian'ny hormonina.
Mihoatra ny 85% ny olona namaly ny fisedrana. Nitatitra i Thierry fa vokatry ny haino aman-jery HGH dia nampitombo ny fahaizana hanatanterahana ny fampiharana sy ny asa ara-batana. Ny hormonenan'ny fitomboan'ny olombelona dia maneho ny fitomboan'ny metabolisma izay manome hery ho an'ny hery fihenan'ny hery. Io fitomboan'ny hery io dia manatsara ny fahaiza-manaon'ny vatan'ny olona manohitra ny fitomboan'ny asa ara-batana, ankoatra ny fampiasana an'io asa io. Ankoatra izany, ny fitsaboana hormonina HGH dia mampitombo ny tahan'ny fiverenan'ny vatany aorian'ny fampiharana sy ny ratra. Ny fanarenana ny asa mivoatra mandritra ny ora torimaso dia midika fa afaka manao fanatanjahan-tena ianao ary matetika kokoa raha tsy mahatsiaro ho reraka.
Tsy afaka mandry ianao amin'ny faramparany miaraka amin'ny vokatra ratsy vitsy - 82,5%
Ny fitsaboana amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny hormone fitomboan'ny olombelona dia manatsara ny fahafahan'ny vatana hahazoana ny ankamaroan'ny torimaso. Ny HGH dia an-tsokosoko voalohany amin'ny alina ary izany dia mitranga rehefa miala amin'ny reraka sy ny vatana ny vatana, mihavitsy mandritra ny andro. Ho an'ireo marary manana fahasembanana ao amin'ny HGH, ny vatana dia tsy mahatsapa ny tombontsoa feno amin'ny torimaso tsara ary ny farany dia mijaly amin'izany. Na dia tokony ho matory adiny valo ora ny torimaso tsara indrindra aza, ny marary salasary HGH, raha ilaina, dia afaka miasa tsara kokoa raha tsy ampy torimaso. Ankoatra izany, ny marary mijaly amin'ny aretina torimaso, ny HGH dia afaka manampy amin'ny famerenana ny fahazarana matory tsara, mamerina indray ny rhythm voajanahary amin'ny vatany.
Fahafahana mitombo ny fihenjanana - 83,7%
Ny alahelo dia iray amin'ireo traikefa manahirana indrindra amin'ny tontolo maoderina. Ny tebiteby sy ny alahelo dia mety hisoroka ny zava-drehetra amin'ny fahasambarana amin'ny fahatsapana ho an'ny tenany, izay mampitombo ny mety ho aretina ara-batana toy ny aretim-panafem-panafody, ny tsy fahitan-tory ary ny fikorontanana. Manana mihoatra noho ny 4 amin'ny marary 5 ao amin'ity fandalinana ity nandritra ny roa volana ny fihenan'ny fihenjanana ny HGH. Ny marary amin'ny tsy fahasalaman'ny HGH dia nitombo mba hampitombo ny haavon'ny kortisol sy hampihenana ny angovo azo avy amin'ny angovo, izay mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny fihenjanana.
Manoro hevitra ihany koa izahay hamaky hoe:
Manomboha fividianana izao dieny izao!